Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Inguqulo French
● Inguqulo ukufakwa French futhi kusebenze nge-intanethi, isekela Ukuvuselela esemthethweni inthanethi.
● Real OEM edition isiqinisekiso, iyahambisana 64bits uhlelo, umsebenzi full wawuhlanganisa
● French has ikhava Security, Made in USA, Made in Ireland, Made in Singapore, njll
Isikhathi Ukuhola: amahora angu-24
Trial oda: Ukusekela
1.Windows 10 ikunika umuzwa ohamba phambili kokuqala okusheshayo nokuthola izinto
2.Windows sawubona is iphasiwedi-free ukungena ngemvume ku-ukuthi ikunika esheshayo, indlela ephephile kakhulu ukuvula Windows amadivayisi wakho
3.Windows 10 Ukhulula ukuvikelwa olunzulu - kuhlanganise unqulo wesi arab, firewall, Ukuvikelwa Inthanethi, nokuningi
Idrayivu Yobhalomfihlo ukubethelwa kwedatha nokuvikelwa usizo nokugcina ulwazi lakho liphephile
4.Hyper-v ukusebenza kukuvumela ukudala imishini virtual, kuyilapho ideskithophu yesilawuli kude ikuvumela ukuba ngemvume kusuka kukhompyutha ehlukile
Isihloko: se-Windows 10 Pro-USB Full Version 64Bit English-International
Amagama Key: amawindi uhlelo 10 yokusebenza; uwine 10 pro okufushane umnyuziki
Windows 10 Pro Isistimu: Remote ngemvume, umsizi digital, kanye nekhono ukusebenzisa amadeskithophu virtual amaningi kuzokusiza ukwandisa umkhiqizo. Dweba noma bhala emakhasini wewebhu futhi sabelane nabo njengoba amanothi ngezifiso. Lapho sekuyisikhathi uphumule, ungasakaza Xbox One okuqukethwe sakho se-Windows 10 PC, laptop, noma ithebhulethi.
Thatha amanothi entsha Microsoft Edge isiphequluli sewebhu
Dweba, ukugqamisa, noma ukubhala ngqo ekhasini lewebhu nge esithintwayo noma igundane, bese wabelana amanothi akho nabanye.
Yenza ngokwezifiso Qala imenyu
Khetha ukubonisa izinhlelo zakho esetshenziswa kakhulu noma ungeze kamuva, kumafolda athile, noma izilungiselelo zesistimu.
Qalisa wokusebenza amaningi ku-PC eyodwa
Dala imishini virtual Hyper-V ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ezingaphezu kwesisodwa ngesikhathi esisodwa. (Hyper-V kudinga-64-bit uhlelo nge SLAT amakhono kanye ezengeziwe 2GB RAM.)
Ngena ngemvume ukude nge Desktop Remote
Ngena ngemvume ku-i-Windows 10 Pro ekhaya, ehhovisi, noma lapho sisendleleni. (Inthanethi edingekayo; izimali-ISP zingase zibe khona.)
Ukufinyelela kudivayisi yakho ngokusebenzisa zeminwe yakho, ubuso, noma iris
Khetha i-Windows 10 amadivayisi nge-Windows Sawubona bazokubona ubukhona bakho, uvula ngaphandle kwesidingo iphasiwedi. (Idinga isifundaminwe, noma inzwa IR noma yebhayomethrikhi.)
Screens ukuzivumelanisa ukulingana amadivayisi wakho
umumo ekwiskrini eshintsha ukuma ukuvumela navigation lula, nezinhlelo zokusebenza isikali kuzibonisi ezahlukene obujwayelekile.
Finyelela wenethiwekhi yakho
Windows 10 Pro uxhuma nebhizinisi noma isikolo lakho lesizinda ukufinyelela amafayela inethiwekhi, amaseva, abanyathelisi, nokuningi.
Google Xbox One imidlalo ku-Windows 10
Sakaza i-Xbox One yakho imidlalo a Windows 10 PC, laptop, noma ithebhulethi. Play imidlalo elungiselelwe-Windows 10, noma irekhodi futhi wabelane amageyimu zikhathi nge esakhelwe Game DVR. (Broadband inthanethi oludingekayo.)
imisebenzi eminingi Kalula on screen eyodwa
Qondisa kuze kube zokusebenza ezine esikrinini, noma dala amadeskithophu virtual ukuze uthole isikhala esengeziwe ukusebenza izinto okudingayo.
Thola usizo umsizi digital
Cortana likusiza kuwo wonke amadivayisi wakho Windows 10, ukubeka izikhumbuzo, ekusizeni ukubhala ama-imeyili, noma ibamba izingxoxo nabangani kanye namalungu omndeni. (Cortana isipiliyoni kungehluka ngezifunda nedivaysi.)
Thuthukisa kudatha yezokuphepha
Windows 10 Pro izipesheli ukubethela nge Idrayivu Yobhalomfihlo i ubuchwepheshe, okuzenzekalayo nge-Windows Update, ukusiza ukuvikela idatha yangasese. (Idrayivu Yobhalomfihlo kudinga Ethembekile Platform Module 1.2 noma 2.0, noma ye-USB flash drive.)
Ihlangene ufinyelele izinhlelo zokusebenza
Windows 10 Pro kukuvumela ukudala siqu esigabeni sakho lokusebenza e-Isitolo se-Windows ukuze ufinyelele ngokushesha izinhlelo zokusebenza. (Inombolo zokusebenza ukuthi kungenziwa ubuthaphuthaphu lizoncika lesinqumo ubuncane for isicelo.)
Previous: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Inguqulo e FQC08929 english
Okulandelayo: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Inguqulo French ne serial Ukhiye kusebenze inthanethi
Ngaphambi kokuthi ulande Windows 10 Professional, ikhompyutha yakho kumele ukufeza nalezi zidingo ezilandelayo:
Iprosesa: 1 gigahertz (GHz) noma ngokushesha.
RAM: 1 igigabhaythi (GB) (32-bit) noma 2 GB (64-bit)
Mahhala kanzima sediski: 16 GB.
Ihluzo ikhadi: Microsoft IDirectX 9 ihluzo kudivayisi nge WDDM umshayeli.
Microsoft Win 10 Pro Japanese OEM Inguqulo 32bit ...